नेपाल आज | सरकारसँग राजपा असन्तुष्ट ( भिडियोसहित)
सरकारसँग राजपा असन्तुष्ट ( भिडियोसहित)
सरकार र राजपाबीच राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि दुई बुँदे सहमति भएसंगै अब राजपा सरकारमा सहभागी हुने र दुई नम्बर प्रदेशको सरकार पनि हेरफेर हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यो सम्भावना अब भने कम हुँदै गएको छ । राजपा सरकारसँग धेरै कुरामा असन्तुष्ट रहेकाले तत्कालका लागि सरकारमा जाने र प्रदेश २ को समीकरण फेरिने कुनै सम्भावना छैन ।
राजपा महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘ हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जाने वा समीकरण फेर्ने कुनै सम्भावना छैन । सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, संविधानको संशोधन लगायतका मुद्दा सरकारले पूरा गरे केही सोच्न सकिएला तर सरकार त्यो बाटोमा छैन । ’
महासचिव झाका अनुसार सरकारमा जाने विषयमा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्थ ठाकुरसंग पछिल्लो पटक कुरा गरेका थिए । उपसभामुख चयन, सरकारमा सहभागिता, प्रदेश २ को समीकरण फेरबदल लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुरा राखेका थिए । तर, नेता ठाकुरले आफूहरुका माग पूरा नभएसम्म ती विषयमा कुनै सोच नराखेको जवाफ दिएका थिए ।
जहाँसम्म राजपा नेताहरु दिल्ली गएको कुरा छ, त्यो नितान्त व्यक्तिगत भेटघाट र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि हो, कुनै राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तीका लागि होइन ।
महासचिव झाका अनुसार राजपालाई सरकारको अधिनायकवादी शैली मन परेको छैन । जसरी ललिता निवास जग्गाका विषयमा छानीछानी आफना विपक्षीलाई अख्तियारमार्फत मुद्दा लगाइएको छ, त्यो बेठिक छ । यो प्रतिशोध लिने काम भएको छ ।
‘ एउटै क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री दोषी नहुने अनि मन्त्रीहरु दोषी हुने कुरा हुन्छ ?’ झाको प्रश्न छ ।
झाका अनुसार अख्तियारले विजय गच्छदार लगायत जतिलाई मुद्दालाई लगाएको छ यो उनीहरुमाथि अन्याय हो । यो विभेदपूर्ण छ । यो घटनाले अख्तियारमाथि जनताको विश्वास गुमेको छ । सरकारको इशारामा गलत काम गर्ने अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउँदा फरक पर्दैन ।
नेता झा भन्छन्, ‘अहिले एमसीसीका विषयमा अनावश्यक विवाद गरिएको छ । एमसीसी नितान्त विकासे परियोजना हो । हामी आफनो देशको विकास गर्न नसक्ने अनि कहिंबाट आएको सहयोगमा पनि नानाथरी बहस गरी समय वर्वाद पार्ने ? सकिन्छ, यसका प्रावधान संशोधन गरी पारित गरौं । संशोधन गर्न नसकिने भएपनि पारित गर्दा फरक पर्दैन । ’
वर्तमान सरकारले जनताको नाममा जतिसुकै ठूला गरेपनि जनताप्रति रत्तिभर संवेदनशिल नभएको झाको आरोप छ ।
‘अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा समेत देखा परेको र सिन्धुपाल्चोकको जुगल ३ मा कोरोना जस्तै लक्षण भएको रोगका कारण गाउँ नै विरामी हुँदा पनि सरकार मौन छ । चीनबाट नेपाली ल्याउने विषयमा कुनै तयारी छैन । संक्रमितको सुरक्षित उपचार र संक्रमण फैलिन नदिन कुनै होशियारी अपनाएको छैन । यो भन्दा ठूलो संवेदनाहीन काम के हुन सक्छ ?’ झाको आक्रोश छ ।
रौतहटमा सेना जबानको तान्डब : धारिलो हतियार प्रयोग गरी गाउले माथि निर्मम कुटपिट !
मङ्गलबार, ०९ असार २०७७
प्युठान नगरपालिकाले शुरु ग¥यो निःशुल्क शिक्षा
चीनले देखायो असली हर्कत, ६० बर्ष देखि नेपाली गाँउ तिब्बतको अधिनमा
चिनियाँ दूतावास अगाडि घन्कियो : ‘गो ब्याक चाइना’
नयाँ पार्टीको सुत्र जनताको बहुदलीय जनवाद